IHuawei ipapasha icandelo leMibuzo neempendulo kwiwebhusayithi yalo ukuze iphinde ibenokuzithemba | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isigebenga sonxibelelwano eTshayina, Huawei, Iyaqhubeka nokuzama ukuphinda ithenjwe ngabalandeli bayo kunye nabathengi, ziphikisiwe inkxalabo kwezokhuseleko kunye nezithintelo ezahlukeneyo ekusebenzeni kwenkampani ngu Urhulumente wase-US.
Ukuze ugcine abathengi abakhoyo, kwaye mhlawumbi uyiqonde amazwe asacinga ukusebenzisa izixhobo zeHuawei ze5G, isigebenga sezonxibelelwano eTshayina sipapashe Imibuzo eneenkcukacha kunye nothotho lweempendulo kwiwebhusayithi yalo enesihloko esithi "Idatha yeHuawei".
Olu hlobo lwenyathelo luya kuqhubeka nokuthathwa yinkampani yaseTshayina Ngelixa urhulumente wase-US eqhubeka nokucinezela amahlakani akhe ukuba ayithintele kuvavanyo lwezixhobo zayo ze5G. (Fumanisa: IHuawei ibonelela ngelebhu yokhuseleko e-Poland ukudlula kwi-5G)
I-United States, ngaphandle kwesiseko sekhonkrithi, ikubonakalisile oko Izixhobo zikaHuawei zingasetyenziselwa ukuhlola urhulumente waseTshayina. Intshukumo yamva nje yase-US kuthiwa ngumyalelo olawulayo othintela ukusetyenziswa kwezixhobo ze-Huawei ze-5G ngabaphethe i-US. Injongo ye-Q & A kukuhlangula nakuphi na ukulunga kukawonke-wonke okusaphumeze iHuawei. Sele i-US, UK, Canada, Ostreliya, New Zealand kunye EJapan kuthintele iHuawei ekuboneleleni ngesixhobo se5G. Amazwe aliqela aseYurophu kuthiwa athathela ingqalelo inyathelo elifanayo kwaye kungoku nje avavanya indawo yawo.
Kwimibuzo neempendulo zakho, U-Huawei uthi akukaze kubekho ulwaphulo-mthetho olukhulu kwiminyaka engama-30 yokusebenzaKodwa ukuba ubungqina bunikiwe, kuya kusingathwa 'ngqo'. Inkampani yaseTshayina ikwabanga ukuba ngaphandle kweengxelo ezininzi ezingachanekanga, "umthetho waseTshayina awufuni" kufakwa iingcango zangasemva "kuthungelwano nakwezinye izixhobo.
Inkampani iyaqhubeka ukukhanyela Naluphi na unxibelelwano olubi nomkhosi wase-China okanye iarhente yezokhuseleko. Ikwagxininisa kwimfuneko yokuba amazwe aqonde ukubaluleka kokuseka imigangatho efanayo, ukwamkela ezona ndlela zilungileyo zeshishini, kunye nokuphumeza iinkqubo zokunciphisa umngcipheko ukuqinisekisa ukuba kukho isiseko sokukhetha abanikezeli bobuchwephesha.
Akucaci ukuba oku kuqhekeka e-US kukunyuka kwemfazwe yorhwebo yase-US-China okanye ukuba iinkxalabo ziyinyani ye-100%. Ukuba ufuna ukufikelela kwicandelo lokucacisa uphawu, ukufikelela apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuvalwa kwe5G: IHuawei ipapasha icandelo le-Q & A kwiwebhusayithi yayo ukuze iphinde ibenokuzithemba
Yintoni i-gyroscope kwi-Android kwaye yenzelwe ntoni?